Olee otu 775 DC motors - Ikkaro
Inicio >> Ndị na-arụ ọrụ >> Igwe eletriki >> Ndenye 775
Echiche m bụ ịzụta 2 brọsh moto. Otu n'ime 12V, nke nwere obere mgbagha mana ọtụtụ ọgbaghara nke m chọrọ iji mee ka onye na-afụ ụfụ na nke ị hụrụ na onyonyo ahụ bụ anụ ọhịa 288W na ọtụtụ torque, ịnwale mee mini-kart maka ụmụ agbọghọ. Ma onye na-afụfu mmiri adịghị na ngwaahịa naanị otu a abịakwute m.
Vidio ahụ kpaliri m maka onye na-afụ ụfụ
Ya mere, m na-ekwu maka 775s n'ozuzu m ga-ekwu maka ọrụ nke aka m.
Ha bu igwe ugbua, ma ha nwere otutu ike na otutu onwu. Ha na-arụkarị ọrụ n'etiti 6 na 36 V, ọ dabere na ihe ịzụrụ, ụdị ahụ ga-adị iche ma nwee ike iri ihe ruo 10A yabụ kpachara anya ebe ị jikọtara ya.
Akụkụ ya bụ 66,7x 42 mm bụ nha nke cylinder mpụta, yana dayameta nke 42 mm na axis 5 mm.
Ngwurugwu a na-apụkarị 17 mm ọ bụ ezie na nke a adịworị iche dabere na onye nrụpụta.
Banyere ogwe mmepụta, ị nwere ike ịzụta ya okirikiri ma ọ bụ na D dabere na mkpa ị nwere na ọrụ gị.
Enwere brushes na brushless.Brushles na-enweghị brushes na-arụ ọrụ nke ọma, mana cheta na ị ga-eji onye njikwa maka ọrụ ha, ebe ya na moto nwere brushes itinye voltaji na ya ga-arụ ọrụ.
Ha bụ igwe na-agba ọsọ ọsọ, nke nwere ike ịdị site na 12.000 rpm ruo 21.000 rpm.
Chọta mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nke onye nrụpụta gị, ebe ọ bụ na ọ dịghị otu mpempe akwụkwọ maka 775 n'ihi na ha bụ motọ dị iche iche na akara ọ bụla dabere ga-enwe ụfọdụ njirimara na voltaji, ike, wdg.
M ahapụrụ gị ihe atụ, mana ihe ị ga-eme bụ ịchọ mpempe akwụkwọ ntanetị nke ihe atụ ahụ ị zụtara. N'ebe ahụ, ị ​​ga-ahụ na mgbakwunye na akụkụ nke nha njin, njirimara ọrụ ya
Purchasezụta m si na ika ahụ HANPOSE 775 DC moto 12V 24V 80W 150W 288W Ma dị ka ị pụrụ ịhụ na anyị nwere ike họrọ si 3 dị iche iche ike. Enwere m 288W kachasị ukwuu
Ọrụ dayameta 5mm
Arịọnụ oghere size M4
Gba ugwu 2
Ike Ike (W) Elu ọnụ voltaji (V) Oke Ugbu A (A) Oke torque (KG) Oke ọsọ (RPM)
Ugboro abụọ bọl agba imewe.
Na jụrụ ofufe.
Low mkpọtụ, ezigbo ọrụ
Ihe omume anyị nwere ike ime
Ọ bụrụ na ị maghị ha, ọnụ ga - eju gị anya oru na ihe ndi ozo anyi nwere ike ime ha. Ndị a na-abụkarị ihe ndị chọrọ torque na ike.
Nke m zụtara dịka ọmụmaatụ bụ 288W
Ana m aha ndepụta na echiche
Karts, igwe eletriki igwe eletriki, scooters na ụdị ngwaọrụ ọ bụla nwere wiil ndị anyị chọrọ ịkwaga
E nwere YouTube playlist raara nye ngwaọrụ mere na 775 Motors na ịkwanyere ọkpọkọ na ọ bụ ịtụnanya
ọzọ oru m chọrọ ime bụ a mini kart
Ihe ị ga - ele ma ọ bụrụ na ị ga - azụta 775
Ego ole ụdị injinị ga-apụta, lee ihe ndị a
Ọ bụrụ na ọ nwere brushes ma ọ bụ enweghị ntụ
Amps ọ na-erepịa
Ihe abuo ahu
Ọ bụrụ na ịnwere egwuregwu ma ọ bụ 2 nke na-ezu ohi bọọlụ
Na nke a, ị ga-aga na-egwu egwu ma na-edozi engine maka ihe ịchọrọ inweta. Need chọrọ ọtụtụ torque dị ka igwe eletriki igwe eletrik nke ga-ebugharị ọtụtụ ibu ma ọ bụ ọtụtụ mgbanwe dị ka ihe nhicha ọkụ?
Have nwere isi mmalite ma ọ bụ batrị na-anapụta V na A chọrọ n'enweghị nsogbu?
Chọrọ ka moto na-enweghị ike rụọ ọrụ nke ọma, nke ejiri njikwa, ma ọ bụ ihe dị njọ karịa nke ị nwere ike ijikwa ozugbo site na gbanwee volta ahụ?
The ihe banyere agba egwuregwu ma ọ bụrụ na ha na-aga 2 n'ihi na ọ bụ ihe mụ
Ebe izu ha
Ọ dị mma, enwere ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ebe ị nwere ike ịzụta ha ma ọnụahịa anaghị agbanwe ọtụtụ. M na-ahapụrụ gị njikọ Amazon, ebay, Aliexpress y Bangood
Ọnụ ego dị n'etiti € 8 na € 13.
Categories Igwe eletriki Igodo bọtịnụ
2 Akwụkwọ data
3 Ihe omume anyị nwere ike ime
4 Ihe ị ga - ele ma ọ bụrụ na ị ga - azụta 775
5 Ebe izu ha